Arabeyes: Alahelo An’i Bhutto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 16:23 GMT
Tamim-pihetseham-po no nandraisan'ny tao Afovoany Atsinanana ny vaovao momba ny fahafatesan'ny Praiminisitra teo aloha Benazir Bhutto.
Avy ao Bahrain, mandefa ny fiarahamiory avy aminy ho an'ny vahoakan'i Pakistana ny blaogera Mahmood Al Yousif
Nalahelo ihany koa ny blaogera Saodiana Rasheed Abou-Alsamh tamin'ny fahalasanan'i Bhutto. Nanoratra izy fa:
Tao Qatar, mampifandray ny herisetra famonoana azy sy ny toe-draharaha mampidi-doza ao Pakistana i Abdulrahman Warsame. Manazava izy fa:
Seabee, izay monina ao Dubai, mahita ny famonoana an'i Bhutto ho toy ny tsy misy dikany. Manoratra izy fa:
Ho an'iilay Israeliàna Nissim Dahan, izay monina ao Etazonia, ny famonoana an'i Bhutto dia mampahatsiahy azy ny “fahatsapana tsy fisiana fanantenana izay manemitra ny ampahany betsaka amin'izao tontolo izao.” Tohizany lavidavitra kokoa: